သင်၏နောက်လိုက်များကိုမဆုံးရှုံးဘဲသင်၏ Twitter Handle ကိုပြောင်းပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2017 သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 1, 2017 Douglas Karr
ကျနော်တို့ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ rebranding မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ် သို့ Martech. အနာဂတ်မှာဒီဘရောင်းတံဆိပ်ကိုဘာကြောင့်ငါတို့ဖြတ်သန်းရသလဲဆိုတာကိုမျှဝေမယ်။ ဒါပေမယ့်အများစုကဒီဝေါဟာရကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ပဲအဓိကထားတယ် ဘလော့ဂ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကနေ။
ကံကောင်းတာက၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးအကောင့်များနှင့်သုံးစွဲသူအမည်အများစုမှာဒီအသုံးအနှုန်းမရှိကြပါဘူး ဘလော့ဂ် သူတို့တွင် - တ ဦး တည်းမှလွဲ။ ! ကျွန်ုပ်တို့၏တွစ်တာအကောင့်မှာ @mktgtechblog ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုတစ်နေ့တာရဲ့ကြီးကြပ်မှုပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က username ဆိုတာကိုမေးတိုင်းငါ mktg-tech-blog ကိုစာလုံးပေါင်းပြီးထပ်ခါထပ်ခါပြန်ပြောရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် site ကို marketingtechblog.com သို့ပြောင်းပြီးကတည်းက ချစ်တယ်, ငါဟူသောဝေါဟာရကိုရှိခဲ့သောအသုံးပြုသူအမည်ကိုရှာဖွေတွစ်တာကိုရှာဖွေ martech အထဲတွင်။ ကံမကောင်းစွာပဲအများစုကိုခေါ်ယူခဲ့ကြပေမယ့်ငါမြင်နိုင်ခဲ့တယ် @martech_zone မရ။
လူအများစုမှားသွားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ် ဦး မှတ်ပုံတင် လက်ကိုင်အသစ် တွစ်တာပေါ်တွင်ထို့နောက်သူတို့မူလအကောင့်ကိုသွားပြီးသူတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သမျှကိုပြောပြပါ။ ပြproblemနာမှာယခင်နောက်လိုက်များနည်းနည်းလေးသာအကောင့်အသစ်ကိုလိုက်လျှောက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်သောင်းချီသောသုံးစွဲသူများကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
သင်၏ Twitter ကိုင်တွယ်နည်းကိုပြောင်းလဲနည်း
ဆိုဒ်များစွာနှင့်မတူဘဲ၊ Twitter ကသင့်ကိုခွင့်ပြုသည် သင်၏သုံးစွဲသူအမည်ပြောင်းပါ! @mktgtechblog ကိုပြောင်းလို့ရတယ် @market_zone ငါ့ရဲ့အကောင့်ကိုကြည့်ပြီးငါတို့ရဲ့နောက်လိုက် ၃၄၀၀၀ ကိုမဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး။ အသုံးပြုသူအမည်အသစ်ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့အသုံးပြုသူအမည်ဟောင်းကိုချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ပြီးပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့စာကိုတင်လိုက်တယ်။
သင်၏ Twitter လက်ကိုင်ကိုပြောင်းရန်သင်၏သင်၏လမ်းကြောင်းကိုသွားရန်လိုအပ်သည် ချိန်ညှိချက်များစာမျက်နှာ (ပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာမဟုတ်) ။ သင်၏လက်ကိုင်ကိုပထမအကွက်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းရှိ၊ မရှိဆိုတာကိုကြည့်ရှုရန် Twitter Handle အသစ်တစ်ခုကိုသင်စတင်စတင်နိုင်သည်။ သင်လိုချင်သည့်အရာသို့ပြောင်းလဲပြီးသည်နှင့်သင်၏ချိန်ညှိချက်များကိုသိမ်းထားပါ။ အခုသင်ပြီးပြီ သင့်ရဲ့ Twitter လက်ကိုင်ကိုပြောင်းလိုက်သည် နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးခဲ့ဘူး။
လူတွေကမင်းရဲ့တွစ်တာဟောင်းကိုရှာနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကကောင်းတဲ့အပိုင်းပါ။ အခုမင်းမှတ်ပုံတင်ပါ Twitter လက်ကိုင်အဟောင်း နောက်တစ်ခါ ထပ်မံ၍ သင်ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်းလူများအားအသိပေးရန်သတင်းစကားတစ်ခုတင်လိုက်သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အခြားဆိုဒ်ရှိ link တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှအကောင့်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက account ဟောင်းတွင်အောက်ပါသတင်းစကားကိုတင်မည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးအသစ်ပြောင်းထားသောအကောင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခြင်းကိုသူတို့သိလိမ့်မည်။
ဟေ့။ မင်းဒီအကြံဥာဏ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်၊ Twitter မှာငါတို့နောက်ကိုလိုက်ဖို့သေချာပါစေ။
Tags: twitter လက်ကိုင်ကိုပြောင်းပါtwitter username ကိုပြောင်းပါသင်၏ twitter အကောင့်အမည်ပြောင်းပါသင်၏ twitter လက်ကိုင်ကိုပြောင်းပါသင့်ရဲ့ twitter name ကိုပြောင်းပါဘယ္လိုmartech zonetwitter ရွှေ့ပြောင်းတွစ်တာtwitter လက်ကိုင်twitter အသုံးပြုသူအမည်
LeadPages - မိနစ်ပိုင်းအတွင်းလှပပြီးတုန့်ပြန်သောလှသောစာမျက်နှာများကိုဖြန့်ကျက်ပါ
စက်တင်ဘာ 5, 2017 မှာ 5: 40 AM
ကျွန်တော်ထင်သည်မှာ၊ နောက်လိုက်များမပါ ၀ င်ရန်အသုံးပြုသူအမည်ကိုပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲသည်။ သင်ဖော်ပြပုံသည်၎င်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်: https://goo.gl/1Qrnih